तस्विरमा हेर्नुस् सांसदहरुको पारा ! - Saptakoshionline
तस्विरमा हेर्नुस् सांसदहरुको पारा !
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख १७, २०७५ समय: १:४७:३९
देशलाई समृद्ध बनाउछु भन्दै उद्घोष गर्ने नेताहरु नै संसदमा निदाएका छन् । नेताहरु संसदमा निदाउनु कुनै नौलो दृश्य नभएपनि देश बनाउने कसम खाएका नेताहरु नै संसदमा निदाउन थालेपछि जनताले के अपेक्षा गर्ने रु भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश नं ५ को संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध तर्फ देश अगाडि बढाउने बताईरहदा पछि भने सांसदहरु निदाएका थिए ।